Ukongeza iiThumbnail zesiNtu kwiSiteshi sakho seYouTube
Ukuba isitishi sakho seYouTube simi kakuhle, unokubonelela ngesithonjana esisesikweni endaweni yomnye wemifanekiso emiselweyo ethi uYouTube ikhuthaze ividiyo yakho. Unokongeza kuphela i-thumbnail yesiko emva kokuba ividiyo yakho ilayishiwe. Emva kokuba ulayisho lugqityiwe, iYouTube idinga ukuhlalutya kunye nokuqhubekeka ividiyo ngaphambi kokuba wongeze i-thumbnail yesiko.
Ukuba awuyikhethi i-thumbnail, i-YouTube iya kukwenzela yona. Kuhlala kungcono ukuzikhethela ngokwakho okanye ukongeza isiko.
Isithombisi yibhodi yakho yebhodi kwaye iya kuba nefuthe elikhulu ekubeni umntu uza kuyibukela ividiyo yakho. Ukongeza i-thumbnail yesiko kwividiyo yakho:
Ngena kwiakhawunti yakho yeYouTube.
Kwiphepha lakho le-YouTube, cofa i-icon yejelo lakho kwaye ukhethe iStudiyo Sabadali kwimenyu ebonakalayo.
idosi enkulu ye-tramadol
Cofa icandelo loMphathi weVidiyo we Studio Studio.
Ngokuzenzekelayo, kufuneka iye ngqo kwimenyu esezantsi yeeVidiyo.
Fumana ividiyo ene-thumbnail ofuna ukuyenza ngokwezifiso kwaye ucofe iqhosha lokuHlela ecaleni kwayo.
Unikwe iphepha elifana nelo libonisiweyo. Uza kubona uninzi lolwazi oluzibonileyo ngexesha lokulayisha, kodwa ngoku uya kuba nezinto ezininzi, kubandakanya ulwazi lwevidiyo kunye nokuboniswa kwezithonjana.
Ividiyo yeYouTube engenasithonjana siko.
Cofa kwiqhosha le-thumbnail yesiqhelo eboniswe phantsi kwezithonjana ezintathu ezingagqibekanga ezikhethwe yi-YouTube.
Khetha i-thumbnail kwifayile yomfanekiso.
Cofa kwiqhosha lokuGcina utshintsho.
Unomfanekiso omncinci wesiko!
dlulisa idatha kwikhompyuter entsha
Ngaba idramaamine inceda isicaphucaphu
ungaphakama zc 26
Iindleko zequetiapine ngaphandle kweinshurensi
uxinzelelo lwegazi oluphezulu lwe-lexapro
Linganisa ukubanda nomkhuhlane